Helsinki dia mitady mpitsidika virtoaly iray tapitrisa amin'ny taona 2019
Home » Travel Technology News » Helsinki dia mitady mpitsidika virtoaly iray tapitrisa amin'ny taona 2019
Ny traikefa fizahan-tany tanàna virtoaly tokana dia novolavolain'ny Tanànan'i Helsinki miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy VR-studio ZOAN. Virtual Helsinki (VR-Helsinki) dia haseho ao amin'ny Slush, hetsika fanombohana voalohany manerantany, amin'ny 4-5 desambra.
Virtual Helsinki dia kambana nomerika an'i Helsinki izay noforonina tamin'ny fanaovana maodely 3D. Ny tanjona dia ny hamehezana an'i Helsinki ho ivon'ny fahaizan'ny VR / AR, ary koa hisarihana mpitsidika virtoaly an-tapitrisany ao Helsinki amin'ny taona 2019.
“Ny fizahan-tany virtoaly dia lohahevitra mahaliana sy mitombo manerantany. Fantatry ny mpanjifa hatrany ny fiantraikan'ny toetrandro amin'ny fizahan-tany ary maniry handray fanapahan-kevitra tompon'andraikitra izy ireo. Ny fizahan-tany virtoaly koa dia manohana ny tanjon'i Helsinki manokana ho mpisava lalana amin'ny fizahan-tany maharitra ary manamafy ny lazanay ho tanàna mampiasa ny fanavaozana nomerika farany indrindra, ”hoy ny fanazavan'i Laura Aalto, Tale Jeneralin'ny Helsinki Marketing.
Fiainana an-tanàn-dehibe, volavola ary natiora
Vao tsy ela akory izay i Helsinki dia nandresy tamin'ny fifaninanana renivohitra eropeana vaovao an'ny Smart fizahan-tany Smart Tour, ny mason-tsivana izay nahitana ny fampandrosoana maharitra ny fizahantany, ny fampiasana digitalisation amin'ny serivisy fizahantany, lova ara-kolontsaina mahaliana ary fanomezana fizahan-tany vaovao. VR-Helsinki dia mitambatra foto-kevitra mitovy.
Ao amin'ny traikefa an-tanàna virtoaly aseho ao Slush, ny mpitsidika dia afaka mankafy fitsidihana mahafinaritra ao amin'ny Senate Square, tranon'ny mpanao maritrano failandey Alvar Aalto ao Munkkiniemi ary ny nosy fialamboly Lonna. Ny fitsangatsanganana dia miaraka amin'ny mozika sy ny vanim-potoana miova.
Ny atiny koa dia omen'ny mpanome tolotra
Raha maro ireo mpisehatra amin'ny indostrian'ny fizahantany no efa mivarotra ny tanjon'izy ireo amin'ny horonantsary 360 izay azo zahana amin'ny headset VR, ny hevitra momba ny Virtual Helsinki dia lehibe kokoa. Ny VR-Helsinki dia mamela ny mpitsidika hifindra malalaka ao amin'ny fanahafana ny solosaina Helsinki, ary azo atao ny mamorona traikefa fanampiny. Amin'ny ho avy, VR-Helsinki dia ho sehatra nomerika ahafahan'ny mpanome tolotra mihazakazaka ny orinasany ihany koa.
“Ohatra, ny mpitsidika dia afaka mitsidika an'i Helsinki toy ny tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20 na nividy vokatra famoronana Finnish ary nandefa azy ireo tany an-tranony tamin'ny paositra. Ho fanampin'izany, rehefa manjary ara-tsosialy kokoa ny zava-misy virtoaly ato ho ato, ny namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia afaka miara-mivory sy mamantatra ireo toerana virtoaly, "hoy ny fanazavan'i Miikka Rosendahl, tale jeneralin'ny ZOAN.
“Te hanolotra traikefa manaitra kokoa ny mpitsidika i Helsinki. Ny traikefa an-tanàna virtoaly dia manome fotoana tsy manam-petra hitsidihana an'i Helsinki avy amin'ny fiononan'ny sofa manokana. VR-Helsinki dia azo ampiasaina ihany koa hampiroborobo an'i Helsinki ho tanàna fampiantranoana ny kongresy sy ny hetsika, "hoy i Laura Aalto nanampy.
VR-Helsinki dia ho hita amin'ny taona ho avy, ohatra, avy amin'ny magazay atiny VR sy amin'ny hetsika sy toerana samihafa eran'izao tontolo izao.